Ware oo Diday in uu la Xaliyo Xiisadda Beledweyne iyo Kulanka Dabageed – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Madaxwaynaha dowlad goboleedka hirshabelle Maxamed cabdi waare ayaa la sheegay inuu diidanyahay wadahadal uu la yeesho gudomiyihii xilka gobolka hiiraan laga qaaday ee yuusuf Axmed hagar(yuusuf dabageed).
Kulamo uu wadahadal ah uu ku baaqay Ugaas xasan ugaas khaliif, ayaa kusoo dhamaaday iyadoo waxba aysan kasoo bixin, madaama la isku fahmiwaayay qodobadii laga wada hadlay.
Ilo xog ogaal ah ayaa Raadiyaha Simba u xaqiijiyay kulanka inay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan mamulka hirshabelle, waxgaradka gobolka hiiraan, iyo gudomiyihii xilka uu ka qaaday madaxwaynaha hirshabelle ee yuusuf dabageed.
Nabadoo Maxamed isxaaq yacquub,oo kamid ah waxgaradka gobolka hiiraan ee kulanka ka qayb galay ayaa sheegay inaan wax natiijo ah laga gaarin arinta yuusuf dabageed iyo mamulka Hir-shabeelr, madaxwaynaha hirshabelle maxamed cabdi waare uu diidanyahay inuu kulan laqaato yuusuf dabageed.
Xiisada siyaasadeed ee ka taagan gobolka hiiran ayaa bilaabatay, kadib wareegto xil kaqaadis aheed oo kasoo baxday xafiiska madaxwaynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare, tasoo xilka looga qaaday yuusuf Axmed hagar( yuusuf dabageed).
Xiisada ayaa kasii dartay markii iska hor’imaad uu ku dhintay taliyihii qaybta booliska gobolka hiiraan Maxamed macoow xalane, iyo dhaawaca taliyihii boolika magaalada baladweyne.